Maxaa ka socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo? Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, dhacdooyinka ayaa si dhakhso leh isu beddelaya; Maaddaama uu waddanku wajahayo dhibaatada caafimaad ee cudurka feyraska Corona, jawiga siyaasadeed hadda waa la baabi'iyaa
Posted By: Roger Manzekelewaa: Abriil 12, 2020 16: 18 No Comments
Kalsoonida udhaxeysa jilayaasha siyaasada ayaa durbaba heer sare gaartay kahor inta Madaxweynaha dalka, Félix Tshisekedi, uu ku dhawaaqay xaalad xaalad deg deg ah oo caafimaad kadib Covid-19. Xusuusnow in ...	Akhri wax dheeraad ah
Micnaha qarsoon ee 4-ta cunsur ee calaamadda la dul dhigay iskutallaabta Ciise, xisaabtanka Baybalka ayaa sheegaya in Ciise uu ku dhintay iskutallaabta iyo Bilaatos Roomaanka ayaa leh calaamad la saaray iskutallaabta Ciise
Posted By: Roger Manzekelewaa: Abriil 11, 2020 13: 50 No Comments
Maaddaama Kitaabka Quduuska ahi uusan ka fogayn inuu yahay buug furan, waxay muhiimad weyn u leedahay in kor loo qaado daboolka bilowga iskutallaabta Ciise Masiix. Afarta xaraf ee ay ku qoran tahay in ...	Akhri wax dheeraad ah